Shirka maamulka usamaynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo Furmaya dhawaan – Radio Daljir
Shirka maamulka usamaynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo Furmaya dhawaan
Janaayo 9, 2016 5:10 b 0
Sabti, Janaayo 09, 2016 (Daljir) —Todobaadka soo socda waxaa la filayaa inuu furmo shirka maamul usamaynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, Magaalada Jawhar ayaa la sheegay inuu ka furmayo shirku.
Gudoomiyaha baarlamaanka Dowladda Fadaraalka Soomaaliya Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in todobaadka soo socda uu shirku ka fumayo magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe.
Wafti qiimaynaya qabashada shirka oo ka socda Wasaaradda arimaha gudaha,baarlamaanka,Ha’yadda Nabad sugida iyo Sirdoonka ayaa tagay Jawhar.
Xoghayada joogtada ah ee wasaaradda arimaha gudaha Yaxye Cali Ibraahim ayaa isna sheegay in todobaadka soo socda uu furmi doono shirku, wuxuuna tilmaamay in magaalada dowalddu u dirtay wafti dhinacyo badan isugu jira oo qiimayn ku samayn doona shirka iyo qaabka loo qaban doono.
Dowladda Fadaraalka ayaa wakhti badan galisay Shirka lagu dhisayo maamulka gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe,marar badan waxaa baaqday shirka,kadib khilaafyo soo kala dhex galay beelaha wada dega gobolada.
Maxciso oo Qabatay Hogaamiye ka Ganacsan jiray Daroogada